Inkcazo:Irediyo emnyama yeOpel,Ukuhamba kweMnyama emnyama,Umnyama Opel Android 7.1
Home > Imveliso > I-Opel Imoto ye-Dvd ye-Android > Ukuhamba ngeBlack Opel kwi-Android 7.1
1. I- AUX: Lo msebenzi wenzelwe iaudiyo, igalelo levidiyo kunye nemveliso evela kwizixhobo zangaphandle.
Ulawulo lwevili lokuqhuba: Isondo lokulawula iimoto zakho zoqobo ziya kuhlala zisebenza emva kofakelo.
Uqhagamshelo lwe-32GB ye-USB / ye-SD: ene-USB kunye ne-SD slots yomthamo we-32GB, eli candelo livumela ukudlala iaudiyo kunye nevidiyo, ukujonga ifoto, ukuFunda incwadi kwe-E njl njl kwi-SD okanye kwi-USB. Iifomathi zomsindo zeMP3.WMA.AAC.RM.LFAC, MPEG-1/2 / 4.H264.H263.VC1.RV.RMVB.DivX.Sorenson SparK.Spark.VP8.AVS Stream video and JPG / BMP / JEPG / GIF / Umfanekiso wePNG uyaxhaswa.
2. Iilwimi ze-OSD: Iindidi ezingama-37 zeelwimi ze-OSD ziyaxhaswa kubandakanya: isiTshayina seMveli, isiTshayina esenziwe lula, isiJapan, isiKorea, isiArabhu, isiNgesi (Australia), isiNgesi (Canada), isiNgesi (New Zealand), isiNgesi (iSingapore), isiNgesi (United) ubukumkani), isiNgesi (i-United States), isiBhulu, isi-Bahasa i-Indonesia, iBahase Melayu, i-Deutsch (i-Deutschland), i-Deutsch (iLiechtenstein), i-Deutsch (i-schweiz), i-Filipino, i-Fancais (i-Belgique), i-Fancais (i-Canada), i-Fancais (e-France), i-Fancais (Suisse), Italiano (Italia), Italiano (Svizzera), Kiswahili, Latviesu, Magyar, Nederlands, Norsk bokmal, Polski, Portugues (Brasil), Portugues (portugal), Rumantsch, SlovenCina, Suomi, Svenska, Pyccknn.
Izinto ezinokuYilwa: I-8 yamaphephadonga aphilayo kunye namaphephadonga angama-21 acwangcisiwe ngaphambili. Ungaseta nawuphi na umfanekiso owuthandayo njengephepha lodonga. Unikwe amandla kumfanekiso wokuqalisa we-DIY kunye nemenyu ephambili.
Isixhobo sokulungisa eyakhelwe-ngaphakathi: 4 imveliso yejelo 4 * 45W sesikhulisi ibethelelwe kule nkqubo yeaudiyo yemoto.
Ikhonkco lesipili: Ingqamanisa ifowuni yakho ephathekayo nale DVD player trough WiFi okanye USB. Obu buchwephesha bunceda ukuba ufikelele kwizicelo ze-Smartphone yakho kwicandelo lokudlala umculo kunye neevidiyo njlnjl. Ixhasa ngoku i-iPhone, i-Samsung Galaxy (i-Android 4.2 nangaphezulu).
Imifanekiso ye-Black Opel yeRadio Navigation Android 7.1 :
Ifektri kunye negumbi lesampulu likaKlyde:
I-Opel emnyama ye-VPLRA 2005-2008 player ye-dvd Qhagamshelana Ngoku
Irediyo emnyama yeOpel Ukuhamba kweMnyama emnyama Umnyama Opel Android 7.1 Irediyo yeVerna yeVerna Irediyo yemoto yePolo Irediyo yeenqwelo Irediyo ye moto yeSentra Irediyo ye moto ye-SONATA